I-Wildlife Retreat Queen Room
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguIsobel
Amatyholo amahle endalo abuyela kwindawo eyi-20km ukusuka kwindawo yedolophu yaseToodyay. Umtsalane wabakhenkethi, iminyhadala, iimarike, kufuphi neJulimar Forrest, kuphela iyure enye ukusuka ePerth ngemoto.
Igumbi labucala kunye negumbi lokuhlambela, isidlo sakusasa sibandakanyiwe, ukusetyenziswa kwephuli, i-BBQ, i-Fire Pit,, iigadi ezibanzi kunye neentyatyambo zasendle. Ikhangaru kunye neParrot zityisa yonke imihla.
Igumbi lesitudiyo linekhitshi kunye negumbi lokuphumla labucala.
Abanini bahlala kwindawo
Indawo yokupaka eyaneleyo
** Impelaveki yePasika ubuncinci bokubhukisha ubusuku obu-2
Sineekhangaru zasendle kunye nezikhwenene eziza mihla le ukuze zityiswe. Ithuba elikhethekileyo lokusondela kwizilwanyana zasendle, ukuthatha iifoto, ukondla kunye nokusebenzisana nabo.
Ipropathi ejikelezwe ngumhlaba wamatyholo wendalo olungele ukuhamba etyholweni, iintyatyambo zasendle, zinoxolo kakhulu. Phumla ngasechibini, ukhanyise iqula lomlilo kwaye wose imarshmallows yakho, ube namava eenkwenkwezi ezimangalisayo ebusuku.
Isidlo sakusasa sifumaneka kwigumbi lokutyela eliphambili okanye kwipatio rhoqo ngentsasa yokuhlala.
Indawo yokupaka eyaneleyo yeemoto, iiveni kunye neetreyila.
Indawo ezolileyo kuphela yi-20 mins ukusuka kwindawo yedolophu yaseToodyay kunye neyure enye ukusuka ePerth.
Imiboniso yeentyatyambo zasendle ukusuka ngoJuni ukuya ku-Oktobha (Sept - Oct ixesha eliphambili) yenye yezona zinto zibalaseleyo kwi-WA kunye nezityalo ezininzi ezinqabileyo.
Indawo yedolophu enembali inomtsalane wabakhenkethi, imbali, indawo yokuthengisa iwayini, iindawo zokutyela ezahlukeneyo ezibonelela ngemveliso yasekhaya, imarike yamafama, iminyhadala, iminyhadala yamanzi amhlophe kunye nezinto ezininzi ezinomtsalane ezahlukahlukeneyo unyaka wonke.
Idolophu ineevenkile zezipho ezithandekayo ezithengisa iimveliso ezenziwe ekuhlaleni kunye nemveliso ekhulileyo, iZiko leeNdwendwe, iThala leencwadi, indawo yokuhlamba impahla, iSupermarket, iPosi, abalungisi beenwele, abacheba iinwele, isikhululo samapolisa, ugqirha wamazinyo, uGqirha, iKhemisti, ivenkile yebhotile, ivenkile yeKrisimesi, iiNewagents, iikhefi kunye neendawo zokujima.
INortham yimizuzu engama-40 kuphela ukusuka entliziyweni yeAvon Valley eneziko leevenkile ezinkulu, iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi, iHot Air Ballooning, iKlabhu yeAero kunye neBilya Koort Boodja (iZiko leNkcubeko yeMveli kunye noLwazi lokusiNgqongileyo.
IChittering kunye ne-Swan Valleys zikumgama oyi-30 ukuya kwimizuzu engama-45 zizele ziindawo zewayini, iziqhamo zeziqhamo, umzi-mveliso wetshokholethi, umzi-mveliso wesonka samasi, indawo yotywala kunye neendawo zokutyela.
Umbuki zindwendwe ngu- Isobel
Retired teacher with an interest in gardening, wildlife, sewing, cooking and meeting people.